အားလပ်ရက် – ၂ – (ဟိုဟိုဒီဒီ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » အားလပ်ရက် – ၂ – (ဟိုဟိုဒီဒီ)
Posted by Mလုလင် on Sep 10, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 30 comments
ဒီရက်ပိုင်းကတော့ အများသိတဲ့ အတိုင်း ပဲ ….
ဟူး ………… ဆိုပြီး သက်ပျင်းမော ချရပါတယ်။
မိုးတွင်းကလဲ ဖြစ် မိုးကလဲ ကြီး သွားရေးလာရေး က အနည်းငယ် ခက်ခဲ ဆိုတော့ ကာ ..
အရောင်းအ၀ယ်တွေက ပါး လူတွေက အိမ်မှာ နား နဲ့ Taxi သမားတွေတော့ ကောင်းကောင်း နားကား တော့တာ ပါပဲ ..။
ဒီလ ထဲ အားလပ်ရက် ရယ် လို့ မရှိလောက် အောင် အလုပ်များနေလို့ ပိုစ့် ကလဲ တင်ချင် ဆိုတော့ ပုံဟောင်း လေးတွေ ပြန်ရှာ ကြည့်ဖြစ်တယ်..။
ပုံတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း . ဘယ်ပုံကို ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူ နဲ့ ဘယ်လို ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ ပေါ်လာရင်း ပြုံးစိစိ ဖြစ်ရပါတော့တယ် ….
ဒါပဲ အရသာ တစ်မျိုးပါပဲ။
ပထမ ဆုံးပုံကတော့ ကျွန်တော် မရိုက်ဖူးတဲ့ မရိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံ (သတင်းပုံ) ပါ။
အသက် တစ်ချောင်း ၃ ထောင် (မြန်မာငွေ)
မှော်ဘီ ဖက်သွားဖြစ်ရင်း ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးကနေ လိုင်းခိုးသွယ် နေတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နယ်တွေမှာအဲ့ဒါမျိုး တော်တော်ခောတ်စား တယ်လို့ ငှားစီးလာတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာက ပြောပြပါတယ်။ အဲ့လို တက်ချိတ်ပေးတဲ့သူကို သုံးထောင် ပေးရပါတယ်တဲ့။ မှော်ဘီ ရုပ်ရှင်ရုံ မှတ်တိုင်ကနေ အသွားအပြန် ဘတ်စ်ကား ၈ မှတ်တိုင်စာလောက် ကို လူ ၂ ယောက် စီးတာ ဘုရားဝင်ဖူးတာ မိနစ် ၂၀ စောင့်ပေး တာ အပါအ၀င် ကို 1000 ကျပ် ပေးရပါတယ်။ ရန်ကုန် အနေအထေား နဲ့ ပြောရရင် တန်တယ် လို့ပြောရမှာပါ။ အဲ့ ဆရာသမားကို သိချင်တာလေးတွေလဲ မေးလို့ ရတာပေါ့။
နောက် တစ်ပုံကတော့ စိတ်ဝင်တစား
မှော်ဘီ ဖက်က တွေ့ရမယ့် ဧည့်သည် အိမ်မှာ စောင့်နေရင်း ဘေးခြံက ကလေး လေးက လာလာချောင်းနေတာ နဲ့ သူ့ ပုံလေး ရိုက်ဖြစ်သွားတယ် …။ညနေပိုင်း ရိုက်ရပြီး အလင်းက အားနည်းလေတော့ ပုံက နဲနဲ noise ထချင် နေသလိုလို …
မန်းလေး မှာ ဆောင်းတွင်းမနက် အစောကြီး အလုပ်ထ သွားကြတာပါ။ ချမ်းတာအေးတာ ဘေးချိတ် လို့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို တာဝန် ကျေကျေလုပ်ကြမယ့် စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင်တွေပါ။
မန်းလေး မှာ … နေကွဲခါနီး အချိန် ပါ ..။ ရွာထဲ အရောက်ဆွမ်းခံ ကြွဖို့ တစ်ပြ လောက် လမ်းလျှောက်ရပါသတဲ့ .. ကျွန်တော် က ဗျိုး ဟစ် ပေးတာပါ။
Foam မလို ချောင်းရေ သည်သာ…
နွားလှ မော့မော့၊ လှည်းကျော့ကျော့
အခု တင်တဲ့ ပုံတွေထဲမှာ .ပုံဟောင်း တွေ ပါပါတယ်။ အတူတူ ဆော်ခဲ့ကြတဲ့ အမှတ်တရ တွေပါ။
ပြန်ကြည့်ဖြစ်တိုင်း ပြုံးစိစိ ဖြစ်ရပါတယ်။
ကိုလုလင်ရဲ့ လက်ရာရိုက်ချက်ကို ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးသေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်အတွက်တော့ ပုံသစ်တွေပါလားလို့—-။
ခရီးလမ်း သာယာ ပါစေဗျာ ..
လုလင်ရေ canon ထဲက ခုဈေးချပေးနေတဲ့ ၄ ရောင်လာတယ် ( canon ထဲ ဒီအမျိုးတခုပဲ ၄ ရောင်လာတာ )ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားက ထိုင်ဝမ်မိတ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲ့ဒါလေး ကောင်းမကောင်း သင့်မသင့် ကျမကို တချက်လောက် ပြောပြပေးပါလား။
ဆိုနီ အယ်လ်ဖာ စီးရီးက ဈေးပိုချိုနေလို့ ။ ဆိုနီကိုရော ဘယ်လိုများ သဘောရသလဲ မသိဘူး။
Canon ထဲက လေးရောင်လာတာ ဆို . 1100D ပဲ ဖြစ်မယ် .. ၄ သိန်း ခွဲ ၀န်းကျင် ထင်ပါတယ် တီတီ ပုရှ် ရေ…။ 12-MP နဲ့ entry level EOS မို့ အားပေးပါတယ်။ sony နဲ့ ဘာကွာလဲ ဆိုတော့ … အဓိက က တော့သုံးတဲ့ လူ ပဲ လို့ ထင်ပါတယ် တီတီ ပုရှ် ရေ .. ကျနော် ကတော့ Canon 1100D လေး အားပေးချင်သား .. Canon ပဲကိုင်ဖူး လို့ Sony အကြောင်းတော့ သိပ်မသိဘူး .. တီတီ ပုရှ် ရေ ..။
ဆိုနီအယ်လ်ဖာကလည်း နောက်ဆုံးပေါ်ကို canon ထဲက ဒေါ်လှတထောင်ကျော်ထက်ပိုချိုနေတာမို့မေးကြည့်တာ။ ကျမလည်း သိပ်မသိဘူး။ သူငယ်ချင်းက အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေလို့။ ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ။
အဓိက ပြဿနာက ..တီဗီ လုပ်ရောင်းစားတဲ့ ကန်ပနီမို့လို့…
ကင်မလာ မော်နီတာမှာ ပြတာနဲ့ …
ကွန်ပူတာထဲထည့်ပီး ကြည့်ရတာနဲ့ ရုပ်ထွက်မတူတာ…
ဘယ့်နှယ့် မော်နီတာနဲ့ ပေါင်းပီး လူကို လာညာနေသလို ခံဇားရတယ်…
နောက်တခုက ခေတ်အဆက်ဆက် နာမည်ပျက်ခဲ့တဲ့
noise ကိစ္စ … ဆိုနီကင်မလာများသည် ..ဗြုတ်ထသည်ဟု
နောက်ဆုံးကိစ္စကတော့ လန်းစ် ပဲ…
ကန်နွန်း နဲ့ နိုက်ကွန်း လို… မေဂျာ ဆြာသမား ၂ယောက် လို
လန်းစ်ရွေးချယ်စရာ ဆိုနီတို့ ပန်တက်စ်တို့ ပန်နာဆိုးနစ်တို့မှာ
Local ကို Sony သွင်းတဲ့ သူတွေ ဒီ comment တွေ့ရင် ရင်ထု မယ် … Sony ကို အစဉ်အလာ အရ မကြိုက်ပါဘူး ..ဒါပေသိ … နောက်ပိုင်း မှာတော့မပြောတတ်ဘူး …. လောလော ဆယ်တော့ Canon ပဲဗျို့  ..။
ဓါတ်ပုံအယူအဆ မသိ နားမလည်ပေမယ့် ပုံအားလုံးကို ကြိုက်တယ်ဗျာ
ကိုပေ ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ .. မန်းလေးရောက်တုန်းက မတွေ့လိုက်ရဘူး .. နောက် တကြိမ် ပေါ့ဗျာ။
ဒီလို လုလင် ရဲ့ Pro လက်ရာလေးတွေ မတွေ့တာကြာပါပြီကော။
အသက် တစ်ချောင်း ၃ ထောင် (မြန်မာငွေ) ကို မကြိုက်ရက်ပေမဲ့ အကြိုက်ဆုံး အဖြစ် ရွေးသွားပါတယ်။
ခမျာ မဖြစ်ခင် အထိတော့ ဘာမှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါထက် အဲဒါ ညိနေတဲ့ စွန်ကို ပြန်ယူနေတာလား။
ဖြစ်ရင်တော့ မီးသွေးပဲ .. ဒုတ်ချောင်းကို နေပူလှမ်းပြီး လှမ်းချိတ် တာတဲ့ .. :-( မတော်တဆ များ လျှပ်ကူး သွားမှ .. :-(
မောင်လုလင် လက်ရာတွေ မမြင်ရတာ ကြာပေ့ါ။
သတင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံက ပေးတဲ့ မတ်စိတွေက ခိုင်မာသေချာတာမို့ အပေါ်ဆုံးပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
(အင်ဒိုးပုံတွေထက် အောက်ဒိုးပုံတွေကို ပိုကြိုက်တတ်လို့)
ဓါတ်ပုံကောင်းတာတွေမြင်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ် …
ကင်မလာကောင်းကောင်းလေးဝယ်မလို့ ပိုက်ပိုက်စုထားပြီးကာမှ ဖုန်းဟန်းဆက်က ပြသနာတက်လို့ အသစ်ဝယ်လိုက်တာ စုထားတာလေးပြောင်သွားရော … SII ၀ယ်မိလို့ အလွယ်တကူ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ရနေပေမယ့် ပုံထွက်ကိုတော့ မကြိုက်ဘူး …
ဓါတ်ပုံဆိုရင် ကင်မလာကောင်းကောင်းနဲ့ပဲ ရိုက်ချင်တယ် …
အန်တီ မမ နဲ့ အန်တီ ဝေေ၀ ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ …။ ခုတလော တော့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ နဲ့ ကင်မရာ တောင် မကိုင်ဖြစ်ဘူး . :-(
ကင်မလာကို သားသမီးလို တယုတယရှိလှသော
အမောင်လုင် ၏ မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်သော
ပရို လက်ရာများကို ကြည့်ရင်းအားကျသွားပါဂျောင်းးးးးးးးးး
ဦးကြီးမိုက် နဲ့ မအိ ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ … PRO မဟုတ်ပါဘူးဗျာ .. လေ့လာနေတုန်းပါ။ ဦးပိန် တံတား ပုံက ရွှေမင်းသား နဲ့ တူတူ ရိုက်ခဲ့တာပါ။
ပုံလေးတွေ လက်ရာ မိုက်တယ်နော်…
မင်းကွန်း ပုံ တစ်ပုံ ပါတယ် နော်
၀ီရိယကိုကြိုက်ပါတယ်ကိုလုရေ။ နံနက်ခင်းရဲ့ရနံ့ကိုမခံစားရတာကြာပေါ့။ အိပ်ပုပ်ကြီးလာလို့
Mr.Photographer ရဲ့ပုံတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်…. နာမည်လေးတွေပါပေးထားတော့ ဓါတ်ပုံတွေကအသက်ပိုဝင်တယ်…။
ခပ်မိုက်မိုက် အံစာအိအိဖောင်း ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ … ၀ီရိယ ပုံက မန်းလေး ပုသိမ်ကြီးဘက် မနက် ၇ နာရီ ၀န်းကျင် မှာရိုက်ထားတာပါ။
ခံစား ကြည့်ရှူ့သွားပါတယ်.. ဆရာလု ခင်ည..
မင်းကွန်းဘက်လို့ထင်ရတော့ ကိုပေါက်မှ ပါကောပါရဲ့လားမသိ…။
မင်းသားကြီးဦးပိန်ကတော့ တကယ့်ဆရာခန်းပဲ မောင်လုလင်ရေ
မင်းကွန်းဘက် က ပုံက က အမှတ်တရ ပါ .. အဲ့ဒီ့ ဘက် သွားတဲ့နေ့ နဲ့ အလှူရှိတဲ့နေ့ တိုက်ဆိုင် သွားလို့ ဒီလိုပုံမျိုးရတာပါ။ ဦးပေါက်၊ ဦးစိန်သော့ နဲ့ ကျွန်တော် ပေါင်း ၃ ယောက် ရိုက်ခဲ့တာပါ။ မင်းသားကြီး ဦးပိန် က ရွှေမင်းသား နဲ့ ရိုက်ခဲ့တာ ပါ။
ကိုလုရေ အင်မတန်လက်ရာမြောက်တဲ့ပုံလေးတွေကို ကြည့်ရင်း ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ရပါတယ်…… အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ ……. အော် ဒါနဲ့ လက်မလေးထောင်အားပေးသွားပါကြောင်း
ထောင်စရာမရှိလို့ ရှိတဲ့ဟာကို ထောင်သွားပါတယ်ဗျာ